Kianjan’ny Maki Andohatapenaka : Hitsangana ny trano fampiofanana ara-panatanjahantena -
AccueilRaharaham-pirenenaKianjan’ny Maki Andohatapenaka : Hitsangana ny trano fampiofanana ara-panatanjahantena
Anisan’ny tetikasa goavana ho an’ny mpitia fanatanjahantena sy ny tanora ny trano fampiofanana eny Andohatapenaka, eny amin’ny Kianjan’ny Maki. Efa andalam-pahavitana izany fotodrafitrasa tafiditra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izany.
Noho izany indrindra, dia tonga nitsidika ny fivoaran’ny asa-pananganana ny fotodrafitrasa teny an-toerana ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, niaraka tamin’ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), Benjamina Ramanantsoa, izay tompon’antoka amin’ny fananganana. Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny Filoha fa ilaina ny manangana fotodrafitra ho an’ny tanora sy ny mpitia fanatanjahantena toa ny any ivelany. « Ahafahan’ny tanora mivelatra izany, ary ahafahana mitaiza toe-tsaina ihany koa. Izany dia tafiditra amin’ny Fisandratan’ny firenena avokoa. Marihina fa ny fanatanjahantena dia anisan’ny singa iray ahafantaran’ny olona ny firenena iray », hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, nanambara ihany koa ny tenany, raha nahita ny endriky ny Kianjan’ny Maki amin’izao fotoana izao, fa amboarina sy hohatsaraina tsy ho ela io kianja filalaovana baolina lavalava io. « Amboarintsika ity kianja ity, izay tsy nisy fikarakarana mihitsy hatramin’ny nahavitany. Saingy kosa, anjarantsika mpilalao sy mpanao fanatanjahantena no mikojakoja izany », hoy izy.
Etsy andaniny, hatsangana tsy ho ela ao amin’ity Kianjan’ny Maki ity ihany koa ny trano fisoloana akanjo ho an’ireo mpilalao.
Nahazo fiantsoana avy amin’ny “brigade spéciale” etsy amin’ny Toby Ratsimandrava i Hery Rasoamaromaka na Hery Be, noho ny fitoriana napetraky ny senatera Olivier Rakotovazaha. Isan’ireo mpitarika ny hetsika tetsy amin’ny lapan’ny tanàna ny tenany kanefa ...Tohiny